Indlela yokujola HGH - Genotropin HGH ukufundisa indlela yokwenza injection
ngu-HGH Thailand February 07, 2018
I-Genotropin - umkhiqizo oyingqayizivele we-hormone yokukhula eThailand nakwamanye amazwe, uye wazimisela ngokwawo njengemikhiqizo elula futhi ephephile
Indlela yokuzimela ngokuzimela nge-hormone yokukhula?
Ndlula kuqala kusebenziwe the HGH ipeni setha umthamo owudinga, ungaqala ukujova
- susa isikhwama sokuzivikela esikhwameni
- konke ukulungele umjovo, umjovo wenziwa ngezandla ezihlanzekile futhi isikhumba sandulela ukuphathwa ngotshwala
- Umsebenzi wokujova i-hormone yokukhula ngaphansi kwesikhumba ungene kumcengezi wamafutha (hhayi imisipha)
Qaphela! Ungasebenzisa noma iyiphi indawo emzimbeni (umuthi, umlenze, isisu noma ihlombe)
- Okulandelayo, udinga ukufaka inaliti kumamitha angama-5 ejulile, ungayenza engxenyeni efanele noma emithambekeni - njengesithombeni
- Sicela ungakhathazeki, inaliti incane kakhulu, ayilimazi nhlobo
- Bese ucindezela inkinobho bese ubamba imizuzwana ye-5
Ukulungele! Kulula kakhulu ngosizo lwemijovo ye-hormone yokukhula, uthola omncane futhi unempilo nsuku zonke
I-hormone yokukhula ye-Order manje chofoza lapha!
ngiyabonga ngemfundo ecacile